चाडवाडमा खसीको मुल्य आकासियो
कपिलवस्तु । मुखैमा आएको बक्राईदसैगै नजिकिदै गरेका दशैल कपिलवस्तुमा खशीको मुल्मा निकै बृद्धि भएको छ । हिन्दुहरुको महान पर्व दशैमा खसी बोकाको बली दिने र मुस्लिमहरुको दास्रो ठुलो चाड बक्राईदमा खसीको कुर्बानी दिने...
आर्थिक केन्द्र बनाउन भन्सार सुधारको तयारी
बुटवल । आर्थिक केन्द्र बन्दै गरेको रुपन्देहीलाई थप सबल बनाउन सरकारले तयारी थालेको छ । गएको आर्थिक वर्ष राजश्व संकलनमा पहिलो बनेको बेलहिया भन्सार नाका र यस क्षेत्रमा बन्दै गरेको पूर्वाधारलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले...
निर्यातजन्य उद्योगमा लगानी गर्नुस् – मन्त्री गौचन
बुटवल, २० भदौं । वाणिज्य मन्त्री रोमी गौचन थकालीले सरकार आफैले उद्योग र व्यापार नगर्ने बताएका छन् । सरकारको काम निजी क्षेत्रलाई उद्योग व्यापारमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने भएको भन्दै बन्द उद्योगहरु चलाउने कुरा...
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण जारी, सुर्यको ४० प्रतिशत काम सकियो
बटौली । बुटवल १२ रामनगर निर्माणधिन अवस्थामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको काम जारी रहेको छ । सम्मेलन केन्द्रको काम अहिले पहिलो चरणमा करिव ४० प्रतिशत काम भइरहेको निर्माण कम्पन्नीले जानकारी दिएको छ । ...
सिण्डिकेट लगाएर सवारीसाधन थोरै चल्दा यात्रुलाई सास्ती
पाल्पा । सिण्डिकेट लगाएर सवारी साधन गाउँमा थोरै चल्दा यात्रुले सधै सास्ती खेप्नु परेको छ । प्रतिष्पर्धात्मक ढंगले सवारी साधन संचालन नगर्दा यात्रु मर्कामा पर्ने गरेका हुन् । ...
स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कोशेली घर
गुल्मी । स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै गुल्मीमा कोशेली घरको नयाँ साे-रुम सुचारु भएको भएको छ । कोशेली घर सहकारी संस्थाद्धारा सञ्चालित कोशेली घर पसलमा स्थानीयस्तरमा घरेलु तथा साना उद्यमीहरुले उत्पादन गरेका विभिन्न बस्तुहरुलाई...
काठमाडौँ । सरकारले प्रस्ट योजना ल्याउने हो भने जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि मुलुकभित्रै तत्काल रु एक खर्ब लगानी जुट्न सक्ने देखिएको छ । ...
व्यापारघाटा ७ सय ३ अर्ब ४८ करोड
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नेपालको व्यापार घाटा २ प्रतिशत बढेर ७ खर्ब ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आवमा नेपालको व्यापार घाटा ६ खर्ब ८९ अर्ब ३६ करोड...
सार्वजनिक यातायातमा ठूला समितिको दादागिरी, कहिले तोडिएला सिन्डिकेटको जालो?
बुटवल । सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनमा सिन्डिकेट प्रणाली खारेज गरेको ६ वर्ष भइसकेको छ। तर, लुम्बिनी अञ्चलका सबै जिल्ला र सबै सडकमा एक न एक बहानामा सिन्डिकेट छ। ...
समयमा काम नसकेपछि ठेकेदारलाई तिराइयो जरिवाना
बटौली । बुटवलको बसपार्कमा बन्दै गरेको बस टर्मिनल तथा सपिङ कम्प्लेक्स समयमा निर्माण सम्पन्न नगरेपछि ठेक्का लिने कम्पनीलाई जरिवाना तिराईएको छ । ...
इन्धन भण्डारणका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी
काठमाडौँ, ८ भदौ । पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण तथा आपूर्तिका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आपूर्ति मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा उहाँले आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहरा र आपूर्ति सचिव श्रीधर सापकोटासँग भारतको रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्मको...
राजधानीबाटै केवलकारमा सरर….
काठमाडौँ ८ भदौ । राजधानीबाट केवलकार यात्रासँगै प्रकृतिसँगै रमाउन चाहने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई नयाँ उत्पादनको विकास भएको छ । प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्र चन्द्रागिरिमा केवलकार सञ्चालन भएपछि पर्यटनको नयाँ गन्तव्य थपिएको हो...